एमसीसी पास गरे एमालेबाट बाहिरिने भीम रावलको घोषणा, एकीकृत समाजवादीमा इन्ट्री ! – Points Nepal
एमसीसी पास गरे एमालेबाट बाहिरिने भीम रावलको घोषणा, एकीकृत समाजवादीमा इन्ट्री !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २१, २०७८ समय: ९:११:२५
नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भमि रावलले एमसिसी सम्झौतामा रहेका केही बुँदाहरु देशको हितमा नरहेको बताएका छन् । अमेरिकी सहोग परियोजना गर्दा भारतको पनि सहमति हुनुपर्ने, अमेरिकाकै कानुन नेपालको कानुभन्दा माथि हुने लगातका केही बुँदा अस्पष्ट रहेको उनको दाबी छ ।
हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम कार्यक्रम यक्ष प्रश्नमा पत्रकार राजेन्द्र वानियासँग कुराकानी गर्दै उनले एमसीसी सम्झौता नेपालमा ल्याउनमा बाुबुराम भट्टराईको पनि हात रहेको बताएका छन् ।
सम्झौतालाई संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान पनि तत्कालीन एमालेकै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जारी गरेको उनले बताएका छन् । खतिवडालाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन आफूले सअघि नै आवाज उठाएको उनको दाबी छ ।
एमसीसीमा मतदान गर्न पार्टीले ह्विीप लगाएको खण्डमा आफू त्यसको विपक्षमा उभिने उनको दाबी छ । यसको अर्थ उनी पार्टी परित्याग पनि गर्न सक्नेछन् ।
‘एकीकृत समाजवादीमा तपाई प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले अहिले अन्य पार्टीमा जाने ोजना नरहेको र आफू एमाले नै रहेको उनो दाबी छ । भविष्यमा के हुन सक्छ भन्ने कुरा अहिल्यै प्रष्ट नभैसकेको उनेको दाबी छ ।
नागरिक पत्रले यो सामग्री तार पार्दा सत्तारुढ गठबन्धनमा एमसीसीबारे छलफल जारी छ भने एमाले अहिलेसम्म प्रष्ट नभइसेको बताइएको छ । तर, एमालेकै पालाबाट एमसीसी संसदमा विचाराधीन भएको हो । एमालेले जोडबलले एमसीसी पास गर्न खोजेको थो तर, तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले टेबुल हुनबाटै रोकेका थिए ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन भन्छ: रकमको दुरु’पयोग सोँच्न पनि सक्दैनौँ
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले भरतपुर महानगरपालिका–१५ रामपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा रकमको दुरु’पयोग सोँच्न पनि नसकिएको बताएको छ। फाउण्डेशनले सोमबार फेसबुक पेजमार्फत एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परियोजनामा कुनै प्रकारको अनिय’मितता र ग’लत कुराको गुन्जायस नरहेको प्रष्ट पारेको हो।
‘सहयोगी मनहरुबाट प्राप्त रकमको दुरुप’योग हामी सोच्न पनि सक्दैनौं। परियोजनामा कुनै प्रकारको अनिय’मितता र ग’लत कार्यको गुञ्जायस नरहेकोमा सबैलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छौं’, फाउण्डेशनले भनेको छ।
त्यस्तै, आर्थिक प्रगतिको सम्बन्धमा २०७८ पुस मसान्तसम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन एक/दुई दिनमै प्राप्त हुने र त्यो सम्बन्धित पक्षलाई बुझाएपछि परियोजनाको वास्तविक आम्दानी/खर्च सार्वजनिक गरिने फाउण्डेशनले जनाएको छ।
फाउण्डेशनले रामपुरमा बनाइरहेको रंगशालाको सरकारी तवरबाट आर्थिक तथा भौतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले रंगशालाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार रंगशालाको भौतिक प्रगति १४ प्रतिशत र खर्च ५१ करोड भएको छ। मन्त्रालयले प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिने बताइएको छ।
चर’म आर्थिक अ’भाव भएपछि फाउण्डेशनले गएको २ पुसमा महानगरलाई पत्र लेख्दै रंगशालाको स्वामित्व ग्रह’ण गरिदिन आग्रह गरेको थियो। यसबीचमा रंगशालाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा फाउण्डेशनले बताएको भन्दा कम भौतिक प्रगति र खर्चको विवरण आएपछि आर्थिक अनिय’मितता भएको गुना’सो आएको थियो।
‘गत २ पुसको निर्णयपश्चात भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट दुवै प्रति’वेदनको मुल्यांकन शुरु गरी भौतिक प्रगतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको छ भने त्यसलाई पुर्ण बनाउन थप मुल्यांकन भइरहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
रंगशाला निर्माणमा आर्थिक अनिय’मितता भएको भन्दै भरतपुरका क्रिकेट प्रशिक्षक अनिल अधिकारीले छान’विनका लागि अख्ति’यारमा समेत उजु’री दर्ता गरको छन्। रंगशालामा भरतपुर महानगरसहित केहि स्थानीय तहको समेत बजेट परेकाले अख्ति’यारले त्यसको छान’विन गर्दै छ।
परियोजना सम्बन्धि भ्रमपूर्ण रुपमा प्रकाशित समाचार र टिप्पणीप्रति फाउण्डेशन दु’खित भएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल धुर्मुसले बताएका छन्। फाउण्डेशनका तर्फबाट आर्थिकलगायतका सबै सबै विवरण सार्वजनिक नहुँदासम्म कपोकल्पीत आरो’प नलगाउन उनले आग्रह गरेका छन्।
क्रिकेट र समग्र खेलको क्षेत्रको विकासका लागि भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण गर्न फाउण्डेशन र महानगरबीच १६ माघ २०७५ मा सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार महानगरले रामपुरमा २० बिघा जग्गा फाउण्डेशनलाई उपलब्ध गराएको थियो। आर्थिक अभाव सिर्जना भएपछि पाँच महिनादेखि रंगशालाको काम ठप्प छ। Source newsparda
Last Updated on: February 4th, 2022 at 9:11 am